Britain By Train - 8 On Kwaye Tips Cima-Track | Gcina A Isitimela
ekhaya > Qeqesha ukuhamba iBritane > Britain By Train - 8 On Kwaye Tips Cima-Track
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 16/01/2021)
EBritani ubusiswa uthungelwano kaloliwe intabalala ethe wonakalisa lomphakathi imbali kunye nophuhliso lwezoqoqosho ezizukulwaneni.
Ukuba unayo Umthandi kaloliwe, umzila UK iholide kubelula imisebenzi umdla kwiindawo zonke indlela ukususela Aberdeen ku Penzance.
Ngoko ke xa isetiwe intliziyo yakho ebona Britain ngololiwe, apha asixhenxe kunye off-track tips.
Ukutyelela Glasgow Station Central Kumele - hayi nje kuphela iya ukuxhumana eScotland xa iyathanda bemvelo, kodwa naye unalo 91 izinga imvume ekhulwini ukusuka Focus egadile Transport, station master Paul eLyons ubaleka ngokhenketho ezine ngemini kwaye neenkwenkwezi ngawakho uthotho yayo BBC TV.
Isitrato esitsha saseBirmingham sesinye isikhululo esinamanqanaba aphezulu okwoneliseka kwabathengi. I-West Midlands rail hub iye redeveloped ngokupheleleyo 2015 kwaye inama yokukhetha zokudlela cool, kuquka i ku-endlwini Five Guys burger joint - ngogqibeleleyo ukuze emhadini-stop.
Akukho Umthandi kaloliwe aza ukushiya Britain ngaphandle siphonononga ngocoselelo Station Cross loKumkani eLondon. Yinto ecaleni Cross loKumkani st Pancras underground Station, ukusondela bukhosi xa Park kunye neBritish Library, kunye nekhaya kwiQonga eliyimfihlo 9 ¾, kwindawo lokuhamba ngenxa Hogwarts Express - kwanele uthe.
I-Hague ukuba Uqeqesha London
Bordeaux ukuba Uqeqesha London
EGeneva ukuba Uqeqesha London
Train app Raildar iimpawu imephu live kuzo zonke uloliwe kwi UK inethiwekhi kaloliwe - version enamandla nokuba ubonisa oololiwe ehambahamba. fantasy app Le nomthandi loliwe nayo ibandakanya umkhondo ubeko neemephu kuhlangana - yeka into emangalisayo!
5. ukufunda Light
Ukuba emva kokufunda ezinxulumene-kaloliwe riveting, Imigca Parallel ubona Umbhali Ian Marchant jonga wry kwi 175 iminyaka kukhathazeka baseBritani kunye koololiwe. Abhalwa inkanuko kunye ehlekisayo, ukuba i siqonde ezikhuthazayo kungena ubhalo British kunye nenkcubeko.
6. Ukufunda for bathandi okwenyaniso
Ngasekupheleni 19th nasekuqaleni 20th eminyaka, Izikhokelo kaloliwe George Bradshaw yabe ezo apps omhla wabo yaye yanika ingcaciso yakutshanje imizila kaloliwe malunga iBritani lonke yezwekazi Europe. the UTshazimpuzi 1910 Isikhokelo sabhalwa kwincopho engenakuthelekiswa nanto yenethiwekhi kaloliwe yase-Bhritane kwaye ibe yibhayibhile yabaloliwe-fumana iintlelo ezishicilelweyo kwi-Intanethi eAmazon.
7. lokufunda online
Free okanye oluvakalayo-ngexabiso ukufikelela intanethi lufumaneka lula kwi emininzi kwindawo UK kunye namaziko isixeko, ukuze ukuba uhambo yinxalenye obude uye kuthi vu?, abafundayo ukuze bafumane isidanga online kunye uLizo Anglia Ruskin Distance Learning ungaqhubeka kuphazamiseke. Kwaye kukho into ubomi unezihlabo malunga encokola nabo kumazwe eyahlukileyo ngelixa wena Roll emhlabeni nemida iwela clifftops.
Landela la on and off-track iingcebiso lweholide kaloliwe waseBritani nawe awusoze uyilibale - kukubona kwisikhululo.
Ingaba unayo iingcebiso kuhambo kaloliwe? Yabelana nabo kwicandelo izimvo kwaye ukuba udinga ukuba uloliwe – Gcina A uloliwe.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbritain-by-train-8-on-and-off-track-tips%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#ukrail iBritani ybritrail rail kaloliwe travelengland
URobbie Handy usuka eFife eScotland kwaye unomdla koololiwe ukusukela oko waqala ukubabona betyibilika kwiThe Forth Bridge - yenye yezinto ezintle zehlabathi zobunjineli. Ngaphandle koololiwe, zokuhamba, kunye nokuhamba, uyakonwabela ukubhala ngobugcisa, isiko, kunye nezopolitiko ngesiNgesi, IScots, kunye neJamaican Patois. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam
Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe ohamba eScotland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe, Ukuhamba eIceland
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe